﻿﻿ FPTAF - Asan'ny Fikambanana sy ny Vaomiera
Jao 15:5 Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy dia mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona.
Fil 2:12-14 ...miasà amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana
Mahaliana anao ve ny asan'ny Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF?
1) Kristy Lohan'ny Fiangonana
Jesoa Kristy no lohan’ny Fiangonana (Kol 1:18), ary tena tenan’i Kristy ny Fiangonana manaiky azy ho Tompo sy Mpamonjy. Tahaka ny sampam-boaloboka izay tsy afaka ny ho velona raha tsy miray tanteraka amin’ilay Fotony, ny Fiangonan’i Kristy dia tsy afaka ny ho velona ara-panahy raha tsy manao ho antom-pisiana ny firaisany tanteraka amin’ilay Lohany sady fototra ijoroany, dia Kristy.
2) Ny Fiangonan’i Kristy
Ny Fiangonan’i Kristy dia sampana avy aminy, mandray sady fantsona ikorianan’ilay ranon’aina tsy mety ritra avy amin’ny Tompony, ary manao ho vaindohan-draharaha ny mampita amin’ireo rantsa-mangaika rehetra ao aminy ny herin’ny fiasan’ny Fanahy Masina.
3) Ny asan'ny Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF
Ny FIKAMBANANA SY VAOMIERA rehetra velona sy miasa eto amin’ny Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana (FPTAF) dia fitaovana eo an-tanan’ny Tompo Kristy Jesoa Lohan’ny Fiangonana:
- Hitoriana ny Filazantsara sy hampianarana ny tenin’Andriamanitra.
- Hifampizaran’ny mpianakavin’ny finoana ny fahasoavana sy ny hatsaran’ny Tompo.
- Ho sehatra hifampaherezana, hifampitezana sy hifampitondrana am-bavaka.
Hahatonga ny isam-batan’olona hiaina sy hivelona ny famonjen’I Kristy ka hiandrandrany sy hanantenany ilay fiverenan’ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra.
4) Ireo Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF
Maro noho izany ireo FIKAMBANANA SY VAOMIERA eto amin’ny FPTAF izay afaka isafidianan’ny mpianakavin’ny finoana malalaka, araka izay mahamety azy, handraisany andraikitra sy hanompoany ary hivelaran’ny finoany sy ny maha-olona azy rehetra.
Mpampianatra Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra